यो साता चम्किँदैछ यी ९ राशिको भाग्य, कुन हो तपाइँको राशी ? (साप्ताहिक राशिफल) – paradeskhabar.com
September 2, 2021 568
मेष–यो साता धार्मिक, सामाजिक र अरुको हित हुने काममा समय व्यतीत हुनसक्छ । लामो समयदेखि रोकिएका अधुरा कामहरू पुरा हुनसक्छ । एकपछि अर्को अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ । व्यावसायिक काममा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ । मित्र र विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग पाइनेछ । यो साताका लागि शुभ अङ्क ५,६ र शुभ रङ्ग रातो हो । शुभकर्म गर्नु पूर्व महाकालीको आरधना गरि कार्य गर्दा सफलता प्राप्त हुनेछ ।
वृष–यो साता रोकिएको काम दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा सफलता मिल्नेछ । सामाजिक क्षेत्र र राजनैतिक क्षेत्रमा मिल्नेछ । प्रेमसम्बन्ध र प्रणयप्रसङ्गका लागिपनि श्रेष्ठ समय रहेको । साताको अन्त्यमा व्यस्तता बढ्नुका साथै स्वास्थ्यप्रति सजगता अपनाउनु होला । संक्रमण र अन्य रोगबाट बच्न साबुन पानीले राम्ररी हात धुनुहोला । यो साताका लागि शुभ अङ्क २,९ र शुभ रङ्ग सेतो वा पहेँलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व शिवजीको स्मरण गर्नाले सफलता हात पर्नेछ ।
मिथुन–यो साता कार्य सम्पादनमा समस्या आउला । मनमा दुबिधा उत्पन्न हुने र मानसिक चिन्ता बढ्नेछ । नाक तथा घाँटीमा समस्या आउन सक्छ । मङ्गलवारबाट चिताएको कामले तीव्रता लिनेछ । सामाजिक क्षेत्र र शेयर बजारले साथ दिनेछ । सफल यात्राको योग पनि देखिन्छ । यो साताका लागि शुभ अङ्क ३,६ र शुभ रङ्ग हरियो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व महादेवजीको स्मरण गरि कार्य आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
कर्कट–यो सातामा नयाँ र शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । मनमा उत्साहका साथै बोली बिक्ने समय छ । चिताएको कामले तीव्रता लिनेछ । आफन्त र साथीभाइबाट सहयोग तथा हौसला प्राप्त हुनेछ, तर नियमित खर्चसमेत बढ्ने योग छ, सचेत रहनु होला । यो साताका लागि शुभ अङ्क १,४ र शुभ रङ्ग हरियो वा सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु अघि हनुमानजीको स्मरण गरि यात्रा गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
सिंह–यो साता सकारात्मक छ । धर्मकर्म तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने बेला छ । सेयरको कारोबारमा फाइदा पनि हुनसक्छ । साताको अन्त्यमा अनावश्यक ठाउँमा धन खर्च होला । खानपान र स्वास्थ्यप्रति सजग रहनु होला । यो साताका लागि शुभ अङ्क १,७ र शुभ रङ्ग रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व असहायलाई सहयोग गर्नाले ग्रह पीडा कम हुनेछ र लाभ मिल्नेछ ।
कन्या–यो साता कुनै न कुनै कुराले मनमा शान्ति छाउनेछ । मानसम्मान र पद प्रतिष्ठामा वृद्धि होला । महिला वा मित्रबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । मनोरञ्जनमा सहभागिता भइएला । प्रेम जीवन सबल र सफल हुनुका साथै आम्दानीका नयाँ स्रोत बढ्नेछन् । यो साताका लागि शुभ अङ्क १,८ र शुभ रङ्ग हरियो हो । शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि बगलामुखीको स्मरण गरि कार्य आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
वुश्चिक–यो साता अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्नु पर्ला । स्वास्थ्यमा समस्या हुनसक्छ त्यसैले सङ्क्रमणबाट आफू पनि बच्ने र अरूलाई पनि बचाउन सहयोग गर्नु होला । आत्मबल बढाएर काम गरेमा असफल भइँदैन । बुधवारबाट साथी भाइको भेटघाटले मन प्रफुल्ल रहला । यो साताका लागि शुभ अङ्क २,७ र शुभ रङ्ग सेतो वा निलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व असहायलाई सहयोग गर्नाले ग्रह पीडा कम हुनेछ ।
तुला–यो साता रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा रुची बढ्नेछ । पढाईमा सहजता मिल्नेछ । नजिकको मित्रसँग भेटघाट हुनेछ । सांगीतिक क्षेत्रमा रुची बढ्नेछ । साताको मध्यमा सरकारी निकाएको भय रहला । नियमित खर्चसमेत बढ्ने योग छ । यो साताका लागि शुभ अङ्क ३,८ र शुभ रङ्ग सिन्दुरे वा रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व गणेशजीको दर्शन गरि कार्य गर्नाले राम्रो हुनेछ ।
धनु–यो सप्ताहमा सामाजिक क्षेत्रमा गतिलो समर्थन र सफलता पाइनेछ । रमणीय र सुखद् यात्राको योग छ । नयाँ कार्यको अवसर मिल्नेछ । व्यवसायको सन्दर्भमा आदर्श व्यक्तित्व सँगको सहकार्यले नयाँ अनुभव मिल्नेछ । पुँजी बजारले पनि साथ दिनेछ । यो साताका लागि शुभ अङ्क २,९ र शुभ रङ्ग घिउ रङ्ग हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि भैरवजीले स्मरण गर्नाले अधिक सफलता हात पर्नेछ ।
मकर–तो साता धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । प्रेम सम्बन्धको कोपिला फक्रनेछ । श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ । आँटेको र ताकेको कार्यमा ढिलाई भएपनि पुरा नै होला । साताको उत्तरार्धबाट आर्थिक कारोबारमा मन्दी आउनेछ । स्वास्थ्य प्रति सृजक रहनु होला । यो साताका लागि शुभ अङ्क २,७ र शुभ रङ्ग आकाशे हो । शुभकर्म गर्नु पूर्व भोकालाई खाना दिएर सहयोग गर्नाले ग्रह पीडा कम हुनेछ ।
कुम्भ–साताको सुरुका दिनमा संक्रमण रोगले दुख दिन सक्छ । केही अप्ठ्यारा परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ला । सोमबारबाट शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ । संक्रमण र अन्य रोगबाट बच्न साबुन पानीले राम्ररी हात धुनुहोला र खानपानमा विचार पुर्याउनु होला । यो साताका लागि शुभ अङ्क १,८ र शुभ रङ्ग गुलाबी हो। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व श्रीकृष्णजीको दर्शन गरे राम्रो हुन्छ ।
मिन–यो साता प्यारो साथीसँग र आफन्तसँग समय बित्नेछ । आफूलाई मन लागेको कुरा खरिद गर्न सकिन्छ । शिक्षामा सफलता मिल्नेछ । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । मनोरञ्जनमा सहभागिता भइएला । वैदेशिक क्षेत्रको काम अघि बढ्नेछ । यो साताका लागि शुभ अङ् ५,९ र शुभ रङ्ग गुलाबी वा रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व दुर्गाजीको स्मरण गरि कार्य आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
Prevपागल बुबा र किड्नी फेल भएकी आमा ! कठै, यी बच्चाको बिचल्ली,पागल अवस्थामा यतिसम्म गर्छन् बुबा (हेर्नुस् भिडियो)
Nextभदौ २० गते आइतबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !
आजको राशिफल – २०७८ भाद्र १६ गते, बुधबार,